Umthetho okhusela abathengi - Consumer Protection Act
UMTHETHO OKHUSELA ABATHENGI
Apha ngezantsi kukho amavandlakanyengoMthetho Okhusela Abathengi (CPA). Musaukuthembela ngokupheleleyo koko kubhalwekule ncwadana, kodwa funa iingcebisokwigqwetha lakho. ICPA inceda nakweminye imibaengachazwanga kolu shwankathelo.
ICPA imisela iNational Consumer Commissionenyanzelisa amalungiselelo eCPA.
Ikhusela bani iCPA?
ICPA ikhusela bonke abantu namashishini amancinaneaneempahla nawenza imali engaphantsi kwezigidiezibini zeerandi.Ikhusela abantu abaselungelweni njengenkampaniezineempahla nezenza imali engaphezu kwezigidiezibini zeerandi kuphela kwiimeko ezikhethekileyo.Ilawula ntoni iCPA?ICPA ilawula ukubhengezwa nokuthengiswa kwezintoneenkonzo kwakunye nezinto neenkonzo ngokwazo.
‘Ezi zinto’ ziquka
• Nantoni na ethengiselwa ukuze ityiwe ngabantu
• Into ebambekayo ekunokukwazi ukubhalwa kuyookanye kukrolwe okuthile
• Naziphi na iincwadi, umculo, iifoto, imifanekisoeshukumayo, igemu, iinkcazelo, iikhowudiokanye ezinye izinto ezingabambekiyoezibhalwe nasentweni na, okanye ilayisensienokusetyenziswa nakweyiphi na intoengabambekiyo kwakunye
• Ukuba nelungelo elisemthethweni lomhlaba okanyeizinto ezingekususwa.
• Nawuphi na umsebenzi okanye inkonzo eyenziwangumntu omnye ngelokunceda omnye umntungeendlela engqalileyo okanye engangqalanga
• Ilungiselelo layo nayiphi na imfundo, inkcazelo,icebiso okanye uncedo
• Naziphi na iinkonzo zokubhankisha, okanye ezinyeiinkonzo ezifanayo zezimali okanye ukumelwakomnye umntu ngomnye okanye amkhusele
• Ukuthuthwa komntu okanye nayiphi na impahlaUmthetho okhuselaAbathengio k o u m e l e u k w a z iigqwetha lakho - umce b i s iwakho onokumthembanokulungiselelwa kwakhe indawo yokuhlalaokanye ukutya kwakunye
• Nezinye iinkonzo ezifana nezo.
Ukurhoxiswa kwezicelo ebezisele zenziwe, iiodolonezinye iziceloAbathengi banelungelo lokurhoxisa izicelo abebezenzekwangaphambili zayo nantoni na okanye inkonzonelokurhoxisa nayiphi na iodolo yayo nantoni naokanye inkonzo—ngaphandle kwezinto eziodolwangokukhethekileyo—nekufuneka zihlawulelwe xazirhoxiswa.
Ukuphelelwa nokuhlaziywa kwezivumelwanozexesha elibekiweyoAbathengi banokuzirhoxisa izivumelwano zexeshaelibekiweyo nanini na befuna, kuphela kufuneka banikelowo bathenga kuye into ebhaliweyo ubuncinanekwisithuba seentsuku ezingama-20 zomsebenzingaphambi kwaloo mini bafuna ukurhoxisa ngayo.
Xa umthengi erhoxisa isivumelwano buphuthuphuthu,umthengi unetyala kulowo umthengiseleyo layonayiphi na imali ebhalwe kwisivumelwano ukuyakutsho kumhla wokurhoxiswa kwaso yaye umthengisiunokumdla imali efikelelekayo yokurhoxisaisivumelwano.
Ukuchaza ixabiso noqikeleloAbathengi bamele banikwe uqikelelo lokuba xa bezakulungiselelwa into okanye beza kwenzelwa nawuphina umsebenzi wokuxilonga, unokuxabisa malini na,ngaphandle kokuba abalufuni olo qikelelo.
Umthengisi akanakumbiza mali umthengi ngoqikelelongaphandle kokuba loo mali ibichaziwe kumthengiyaye uyayamkela loo nto.
Ilungelo lokufumana inkonzo esemgangathweniXa umthengisi esenzela umthengi nayiphi na inkonzo,umthengi unelungelo lokuba loo nkonzo ayenzelwengokukhawuleza ize igqitywe.
Loo nkonzo imele inikelwe ngeendlela esemagqabininangendlela alindele ngayo umthengi.
Akumele kubekho nto ingahambi kakuhle ICPA ayifuni kubekho nto ingahambi kakuhle xa abavelisi, abo bathumela izinto kwamanye amazwe okanye abo bathengisa kunye bekhupha izinto zabo.
Bamele bathengise izinto ezikhuselekileyo yaye baya kubopheleleka ngomonakalo obangelwe kukungasebenzi kwezinto zabo, izinto ezonakeleyo okanye eziyingozi, enoba loo ngozi ayibangelwanga ngabo. There are limited statutory defences available to them.
Iwaranti esisinyanzelo yeenyanga ezintathu kwezinto ezilungisiweyo Umsebenzi wokulungisa unewaranti esisinyanzelo yeenyanga ezintathu. Ezi nyanga zintathu zibalwa ukususela kumhla wokufakelwa kwesixhobo esitsha okanye esilungisiweyo.
Ilungelo lokubuyisa izinto ezingekho mgangathweni Umthengi unelungelo lokubuyisa izinto ezonakeleyo nezingakhuselekanga kuquka ezo zingekho mgangathweni. Eli lungelo libakho kangangeenyanga ezintandathu, eqala ukubalwa mhla izinto zasiwa kumthengi. Xa izinto zibuyiswa, umthengi akadliwa mali yaye zonke iindleko neengozi ezikhoyo zezomthengisi.
Izinto neenkonzo ezingacelwanga Umthengi ofumana izinto okanye iinkonzo angazicelanga akanyanzelekanga ukuba ahlawulele ezo zinto okanye ezo nkonzo. Izinto okanye iinkonzo zigqalwa njengezingacelwanga ukuba umthengi akakhange azifune okanye azicele.
Kwahluka kuphela xa umthengi enesivumelwano nomthengisi ukuba uza kumana emenzela izinto okanye iingozi engaphindanga wadlula kuye okanye wamcela. Noko ke, kule meko naziphi na izinto okanye iinkonzo ezahlukileyo kwezo kuvunyelwene ngazo, ziya kugqalwa njengezingacelwanga.
Ilungelo lokurhoxisa intengiselwano okanye isivumelwano esivela ekuthengiselweni ngokuthe ngqo
‘Ukuthengiselwa ngokuthe ngqo’ kuthetha ukuya emntwini (ngokuthe ngqo okanye usebenzisa imail okanye ezinye iindlela ze-elekroniki—ifowuni, ifax, iSMS, iemail, njalo njalo) ukuzama ukuthengisa izinto okanye iinkonzo kumntu othile okanye ukumcela ukuba enze umnikelo.
Xa kuthengiselwene ngokuthe ngqo, umthengi unokuyirhoxisa loo ntengiselwano ngaphandle kwesizathu okanye ukudliwa imali. Ukuze enze loo nto umthengi umele anike umthengisi into ebhaliweyo echaza ukuba ufuna ukuyirhoxisa intengiselwano leyo. Le nto ibhaliweyo imele ithunyelwe kumniniyo kwiintsuku ezintlanu zomsebenzi emva kokwenziwa kwesivumelwano okanye ezokuziswa kwezinto ezo zithengiweyo, enoba yiyiphi eze kamva kuzo.
Imiqathango yokuthengiselana izinto neenkonzo Izinto okanye iinkonzo azimele zibhengezwe ngeendlela elahlekisayo, enobuqhetseba nobuxoki.
Umvellisi, umntu othumela izinto kwamanye amazwe okanye umthengisi akanakubhengeza izinto okanye iinkonzo ezingekho mthethweni.
Ukubhengezwa kwezinto okanye iinkonzo kumele kwenziwe ngeendlela engaphazamisaniyo nesidima sakhe nabani na okanye esekelwe kucalucalulo.
Unokuqhagamshelana neNational Consumer Commission ngokuziyela, nge-e-mail, ifax okanye ngefowuni.
Noko ke, igqwetha lakho lingakucebisa enoba unesikhalazo esivakalayo na ngokuvisisana noMthetho Okhusela Abathengi yaye linokukuncedisa xa ufaka isikhalazo ukuze unyanzelise amalungelo akho kumthengisi.